Kenya oo sheegtay in ay Fashilisay Weerar lagu qaadi rabay Nairobi… – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAKenya oo sheegtay in ay Fashilisay Weerar lagu qaadi rabay Nairobi…
Saraakiisha Ciidamada Booliska ayaa dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab , kuwaasoo doonaayay in ay weeraraan Gudaha Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya.
Hay’adda Ammaanka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen xubno ka tirsan Shabaab ay kiraysteen Hoteel saldhiga Nairobi ku dhegan, islamarkaana ay qorsheeyeen in ay weerar qaadaan.
Kenya waxa ay sheegtay in ay fashilisay Weerarkaasi oo la doonayay in lagu qaado Kenya, islamarkaana ciidamada Booliska ay xireen ilaa iyo Shan ruux ka dib markii ciidamada Booliska ay xog u soo gudbiyeen dadka Shacabka ah.
Ciidamada Boolisa ayaa sheegay in xireen Cabdi Majiid Aadan 24 Sano jir ah oo gurigiisa laga helay Shan Qori oo AK 47, islamarkaana dhawaan la horkeeni doono Caddaaladda
Sarkaal Sare oo ka tirsan ciidamada Booliska ayaa u sheegay Warbaahinta dalka Kenya in sidoo kale ay xireen Saddex xubnood oo kale oo la tuhmaayo.
637,519 total views, 3,833 views today
637,519 total views, 3,833 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
637,390 total views, 3,829 views today
637,390 total views, 3,829 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
637,424 total views, 3,831 views today
637,424 total views, 3,831 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
637,481 total views, 3,829 views today
637,481 total views, 3,829 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
637,541 total views, 3,831 views today
637,541 total views, 3,831 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]